Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်)
Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Isomil အနွယ်ဝင်ပစ္စည်းများသည် မွေးကင်းစမှ အသက်၂နှစ်အရွယ်ထိ ကလေးများအတွက် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားသော ပြီးပြည့်စုံသည့် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ ဖြစ်ပါသည်။ မွေးကင်းစကလေးများ၊lactose intolerance ဝေဒနာရှိသော ကလေးငယ်များ၊နို့နှင့် ဓါတ်မတည့်သော ကလေးငယ်များနှင့် ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ဖြစ်နေသော ကလေးငယ်များအတွက် အထူးရည်ရွယ်ပါသည်။
Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သင့်ကလေးကျန်းမာရေးအတွက် အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကို အထူးဂရုပြုလိုက်နာသင့်ပါသည်။ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး၊သန့်ရှင်းစွာကိုင်တွယ်ခြင်း နှင့် သန့်ရှင်းစွာ သိမ်းဆည်းခြင်းတို့သည် ကလေးဖြည့်စွက်စာပြင်ဆင်ရာတွင် အရေးပါသော အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဖြည့်စွက်စာနှင့် ရောနှောရန်အတွက် ရေအေး သို့မဟုတ် ရေနွေး မည်သည်ကို အသုံးပြုရမည် မသေချာလျှင်၊ရေနွေးနှင့် ပြုတ်ထားသော (ပိုးသတ်ထားသော) ပုလင်း၊ဗူး၊နို့သီးခေါင်းစသည်တို့ အသုံးပြုရန် လိုမလို မသေချာလျှင် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကို သေချာစွာ မေးမြန်းပါ။
သင့်လက်၊ဖြည့်စွက်စာပြင်ဆင်ရာ စားပွဲမျက်နှာပြင် နှင့် ပန်းကန်၊ခွက် စသည်တို့ကို သေချာစွာ ဆေးကြောပါ။
ဖြည့်စွက်စာအမှုန့် တဇွန်း (ခြင်တွယ်စရာ ဇွန်းလေးပါလာပါလိမ့်မယ်) [၈.၃ ဂရမ်ခန့်]ကို ရေနှစ်အောင်စနှင့်ရောပါ။
ပုလင်းကို အဖုံးပိတ်ပြီး သေချာစွာ လှုပ်ပါ။ ပြီးရင် နို့သီးခေါင်းတပ်ပါ။
စ တိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ တနာရီအတွင်း အကုန်တိုက်ပါ။ မကုန်ရင် သွန်ပစ်ပါ။ ထပ်မသုံးပါနှင့်။
Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Isomil ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Isomil ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Isomil ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Isomil ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Isomil ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ပဲပိစပ်အခြေခံထုတ်လုပ်ထားသော ဖြည့်စွက်စာများကို လမစေ့ဘဲ မွေးဖွားပြီး မွေးဖွားချိန်တွင် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၈၀၀ ဂရမ်အောက်နည်းသော ကလေးများအား မတိုက်ကျွေးသင့်ပါ။
ဖျော်ထားသော ဖြည့်စွက်စာကို ပြန်နွှေးရန် မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကို မည်သည့်အခါမှ မသုံးရပါ။ ပြင်းထန်ဆိုးရွားသော လောင်ကျွမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
(ကလေးအထူးကုဆရာဝန်မှ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြား စောင့်ကြည့်နေမှုမရှိလျှင်) ဖြည့်စွက်စာအမှုန့်များကို လမစေ့ဘဲမွေးသော ကလေးများ သို့မဟုတ် ခုခံအားစနစ် ပြဿနာရှိသော ကလေးများကို မကျွေးရပါ (အဆိုပါ အမှုန့်များသည် အထူးတလည် ပိုးမွှားသန့်စင်ထားခြင်း မရှိ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်
ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးစဉ် : အန္တရာယ်မရှိပါ။
Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်သည့် သက်သေအထောက်အထား အချက်အလက်များ မရှိသေးသည့်အတွက် စိတ်ချရပါသည်။ သို့သော် မလိုလားအပ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လျှင် သင့်ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံး အသိပေးပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Isomil ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Isomil က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Isomil ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် : 100 cal/kg/day ; တိုက်သင့်တဲ့ ထုထည်ပမာဏ : 30 ml/kg နှုန်းနှင့် တိုက်ရမည်ဖြစ်ပြီး တနေ့လျှင် ၁လီတာထက် နည်းရမည်။
Isomil တအောင်စလျှင် ကယ်လိုရီ ၂၀ ပါဝင်ပါသည်။
Isomil (အိုင်ဆိုမေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Isomil ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Similac Soy Isomil အမှုန့် : ၁.၄၅ ပေါင် (၆၅၈ ဂရမ်) ဗူး။
Similac Soy Isomil အမှုန့် : ၂.၁၃ ပေါင် (၉၆၄ ဂရမ်) ဗူး။
အသင့်သောက်နိုင်သော Similac Soy Isomil အရည် : ၂အောင်စ (၅၉ မီလီ) ပုလင်း။
Isomil ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Isomil. http://reference.medscape.com/drug/enfamil-isomil- infant-formula-
344452. Accessed October 31, 2016.
Isomil. http://abbottnutrition.com/brands/products/similac-soy- isomil. Accessed